ClearSlide: Mharidzo Platform Yekutengesa Kugonesa | Martech Zone
NeChishanu, Kurume 27, 2015 Douglas Karr
Zvinoenderana neongororo yakaitwa na Forrester, 62 muzana yevatengesi vatengesi vanoda kuwedzera kuoneka mune yekutengesa chiitiko, uye asi zvikamu zvitanhatu chete muzana zvine chokwadi chekuti vanowana ruzivo rwakakwana. Nekudaro, vatungamiriri vekutengesa vanonetseka kuti vanzwisise kuti ndeapi ma reps, zvikwata, uye zvemukati zvinonyatso kushanda mukutengesa kutenderera - zvirinani kusvikira mikana ikakunda kana kurasikirwa.
ClearSlide, yekutengesa-inogoneswa mharidzo chikuva, yaburitsa kupana nduma uye tevera, zvitsva zvinobatsira vatungamiriri vekutengesa kuongorora, kuongorora, uye kuita pane data rekuita rekutengesa.
Vatungamiriri vekutengesa vanoshandisa ClearSlide Engagement uye Tevedzera kuongorora yakaoma nzvimbo dzekutengesa:
Zvekutengesa Mabasa - Vatengesi manejimendi vanogona kuziviswa kana reps iine misangano yekutengesa uye pavanotumira vatengi maemail, nemaonero mune izvo zvigadzirwa zvakafukidzwa. Izvi zvinogona kubatsira mukudzidzisa kwavo kumaneja uye reps uye kubatsira kuziva zviri kushanda uye kwavanodzivirira nzira kuenda mberi bhizinesi.
Mutengi Engagement - Vatengesi manejimendi vanogona kuona kuti maakaunzi anopindura sei zvemukati Kana ivo vachitevera maakaundi, ivo vanogashira pakarepo ziviso kana zvemukati zvakavhurwa uye inguvai yakawanda iyo vatengi vanopedza kuita. Pamisangano yepamhepo, ClearSlide inoverenga mashandisirwo kana kutsauswa kweumwe neumwe anenge aripo ari padanho-re-slide. Iyi data inozo nyorwa muhuwandu hwevatengi hwehukama hwehukama, iyo inogona kuenzaniswa pamimwe mikana vatengesi vari kushanda.
gutsikana - Vatengesi manejimendi vanogona kuona kuti ndezvipi zvekutengesa uye zvekushambadzira zvemukati zvinowirirana nematanho epamusoro ekubata. Ivo vanogona kuraira vekutengesa reps kuti vashandise zvakanakisa zvemukati uye vanobatana nekutengesa kuti vagadzirise mameseji.
Engagement uye Tevedzera zvinobatsira vatungamiriri vekutengesa kuwana kunatsiridza kusimudzira musangano ravo rese. Isu takagadzira chishandiso ichi kupa vatungamiriri vekutengesa iwo maonero avanoda kushandura nzira yekutengesa zvichibva pane rakaomarara data. Uchishandisa Engagement uye Tevedzera, masangano ekutengesa achakwanisa kushandisa yakanakisa kushandisa nguva yavo uye yavo nguva yevatengi. Raj Gossain, VP yechigadzirwa, Clearslide.
Iyo clearSlide chikuva inopa vatungamiriri vekutengesa nzwisiso mune chaiyo-nguva chiitiko chevadzidzi vavo uye inopa yakadzika analytics nezvemhando yezvinyorwa izvo pakupedzisira zvinonyanya kukanganisa nevatengi. Kune vatengesi vekutengesa, ClearSlide inobvumidza kutaurirana kuri nyore nevatengi uye tarisiro, kungave online kana mukati-munhu, uchishandisa ClearSlide's web-based kana nharembozha.
Tags: chakajekaKubatanateveramharidzo yekuratidzirakutengesa kubatanidzwahutungamiri hwekutengesakutengesa manejimendi
Lyris Anotangisa Akazvimiririra Zvemukati Zvekuita